ဆားကို လိုတာထက် ပိုစားမိရင် ဖြစ်ပေါ်လာမယ့် ဆိုးကျိုး (၇) ချက်
HomeKnowledgeဆားကို လိုတာထက် ပိုစားမိရင် ဖြစ်ပေါ်လာမယ့် ဆိုးကျိုး (၇) ချက်
လူတယောက်ဟာ တစ်နေ့ကို ဆား 2300 မီလီဂရမ် (စားပွဲတင်ဇွန်း တစ်ဇွန်း) စားသင့်တယ်လို့ အာဟာရ အညွှန်းတွေမှာ ဖော်ပြကြ ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် နေ့စဉ် စားမိနေတဲ့ ဆားပမာဏက ပျမ်းမျှအားဖြင့် 3400 မီလီဂရမ် (တစ်ဇွန်းနဲ့ သုံးပုံတစ်ပုံခန့်) စားမိနေ ပါတယ်။ ဆားတွေကို လိုတာထက် ပိုစားမိတဲ့အခါ ကျန်းမာရေးကို ထိခိုက်လာနိုင် ပါတယ်။
7. ခြေ၊ လက်များ ရောင်လာခြင်း
6. ရေအလွန် အမင်းဆာခြင်း
5. ဆီးအရောင် ပြောင်းလာခြင်း
- ဆားတွေ အစားများလို့ ကျောက်ကပ်က ပိုအလုပ် လုပ်ရပါတယ်။ ရလဒ်အနေနဲ့ ဆီးအရောင်က အကြည် ဖြစ်သွားတတ်ပါတယ်။
- ဆားကို အစားများလို့ ရေဓာတ် ကုန်ခန်းသွားပါတယ်။ ခန္ဓာကိုယ်မှာ ရေဓာတ်ကုန်ခန်းတဲ့ အခါ ဆီးအရောင်က အဝါရင့်ရောင် ပြောင်းသွားပါတယ်။
3. အရိုးအဆစ်များ ရောင်ခြင်း
2. မကြာခဏ ခေါင်းကိုက်ခြင်း
1. သိမြင်မှုများ လျော့ကျလာခြင်း
ဆားများများစားမိနေတာကို ဘယ်လို လျှော့ချမလဲ။
- ဆားပါဝင်မှု များတဲ့ ပီဇာ၊ အသားညှပ်ပေါင်မုန့်၊ သံဘူးနဲ့ ထည့်ထားတဲ့ စွပ်ပြုတ်၊ မဆလာများတဲ့ အစားအစာတွေကို ရှောင်သင့်ပါတယ်။
- စားသောက်ဆိုင်က အစားအစာတွေမှာလည်း ဆားပါဝင်မှု များပါတယ်။
- အစားအစာ တစ်ခုကို ဝယ်မယ် ဆိုရင် ဆိုဒီယမ်ပါဝင်မှုကို အမြဲတမ်း ကြည့်သင့်ပါတယ်။ ဆိုဒီယမ် 5% နဲ့ အောက် ပါဝင်တဲ့ အစားအစာတွေကို ရွေးချယ်သင့်ပါတယ်။
- ဟင်းတွေထဲမှာ ဆားလျှော့ထည့် ချက်ပြီး အသီးအရွက်နဲ့ ပြုလုပ်ထားတဲ့ ဟင်းခတ်မှုန့်ကို ပိုသုံးသင့်ပါတယ်။